भाडा: अमेरिकी सरकारले इन्टरनेट वाणिज्य नष्ट गर्नेछ Martech Zone
भाडा: अमेरिकी सरकारले इन्टरनेट वाणिज्यलाई नष्ट गर्नेछ
मंगलवार, मार्च 26, 2013 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य मा शm्गल मा छ। रेकर्ड खर्चको साथ, धन अन्तराल निरन्तर वृद्धि, गरिबी बढ्दो छ, बेरोजगारी, खाद्य टिकट, अशक्तता वा कल्याण मा निर्भर नागरिकको संख्या रेकर्ड स्तर मा छ। अमेरिकी अर्थव्यवस्थाको एक मात्र क्षेत्र फल्किरहेको छ - राम्रो कमाई भएको रोजगारी, धेरै रोजगारीका उद्घाटन, टन लगानी कोष, र बढ्दो बिक्रीको साथ। त्यो क्षेत्र हो इन्टरनेट.
ठूला ठूला बक्स खुद्रा विक्रेताहरू पीडित र सरकारको साथ बतख जननेंद्रिय अध्ययन मा पैसा खर्चइकोमर्स बूमको भविष्य सिनेटको जस्तो अन्धकार देखिन्छ भर्खर इन्टरनेट बिक्री करमा बिल स्वीकृत भयो। त्यसोभए ... अर्थतन्त्रको एक हिस्साले दुःख पाइरहेको छैन अब अन्ततः जाँदै छ अर्थव्यवस्थाको हरेक अन्य क्षेत्रमा जोडिन सहयोग गर्यो संघीय सरकार द्वारा।
यदि यो विधेयक पारित भयो भने, यो समृद्धिको अन्त्यको सुरुवात हो जुन हाम्रो इन्टरनेट स्वतन्त्र बजार प्रणालीले विगत २० बर्षदेखि हामीलाई प्रदान गरेको छ। ठूला बक्स अरबपति खुद्रा विक्रेताहरू जसले माल र सेवाहरूको मूल्य निर्धारण र वितरणको स्वामित्व, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरेका छन्, अब इन्टरनेटमा उनीहरूको पकड हराउँदैछ ... र तिनीहरू रोइरहेछन्। हाम्रा नेताहरूलाई इन्टरनेटमा कर लगाउन दबाब दिन उनीहरू अग्रसर छन्।
सबैजना इन्टरनेट मा प्रतिस्पर्धा गर्न को लागी खुला छ
तिनीहरू लज्जित हुनुपर्छ। यसको बारेमा सोच्नुहोस् ... तिनीहरू वितरण वितरण बाहेक केही होइनन् जुन हामी उनीहरूलाई ल्याउनु अघि सामानहरूको लागतको ओभरहेडमा थप्दछ। यदि तपाईं इतिहासमा फर्केर हेर्नुभयो भने म विश्वस्त छु कि खुद्रा विक्रेताहरूले अनुचित रोएको बेलामा सिअर्स क्याटलग उपभोक्ताहरूको ढोकामा यसको मार्ग बनायो र अब तिनीहरू सिधा मेल मार्फत किफायती उत्पादनहरू र सामानहरूमा पहुँच गर्न सक्दछन्। प्रत्येक ठूला बक्स रिटेलरसँग पैसा र अवसर थियो उनीहरूको व्यवसायलाई इन्टरनेटमा बदल्न। यदि तिनीहरू त्यसो गर्न असफल भए, तिनीहरूले परिणामहरूसँग डिल गर्नुपर्छ।
स्थानीय कम्पनीहरूले स्थानीय कर तिर्नु पर्छ
एक स्थानीय ठूलो बक्स रिटेलर भएको थप्छ स्थानीय समुदायलाई खर्च - यातायात लागत, यातायात लागत, पुलिस र चिकित्सा लागत, उपयोगिता लागत ... पानी, इलेक्ट्रिक र फोहोर निपटान सहित। राज्य र स्थानीय बिक्री करहरूले ती लागतहरूलाई स्थानीय क्षेत्रमा अफसेट गर्छन्। यो त्यस्तो प्रणाली हो जुन बुझिन्छ। यदि मैले अनलाइन खरीद गरें भने, यसले मेरो स्थानीय समुदायलाई केहि खर्च गर्दैन। यातायात ढुवानी कम्पनी र पेट्रोल कर द्वारा भुक्तान गरिएको छ। त्यहाँ ट्राफिक लाइटको आवश्यकता छैन, पसलबाट सामान चोरी गर्ने गिरफ्तारीहरू छैन, फोहोर फाल्ने सुविधा छैन, थप सुविधाहरूको आवश्यक पर्दैन ... नाडा।
स्थानीय करको कारण खुद्रा विक्रेताहरूले व्यवसाय गुमाइरहेका छैनन्
त्यहाँ हो स्थानीय खुद्रा विक्रेतामा खरीदको फाइदा ... म सामान लिएर घर ड्राइभ गर्न सक्छु, म कपडालाई कोसिस गर्न सक्दछु, म तिनीहरूलाई उपकरण स्थापना गर्न सक्दछु, म तिनीहरूबाट उत्पादन समर्थन लिन सक्दछु, वा ढिलाइ नगरी खरीद आदान प्रदान गर्न सक्दछु। म अक्सर स्थानीय खुद्रा विक्रेतामा किनमेल गर्छु - तर मैले पहिले प्रयोग गरेको भन्दा कम। इन्टरनेट अधिक सुविधाजनक भएको छ। म अनलाइन शपिंग गर्दिन किनकि म त्यहाँ करहरू तिर्दिनँ। म अनलाईन किनमेल गर्छु किनकि मैले फोनबाट केही मिनेटमा गर्न सक्दछु। कुनै ड्राइभि, छैन, कुनै पार्कि, छैन, लाइनमा पर्खिरहेको छैन, उत्पादनहरूको अन्तहीन पows्क्तिहरू खोजी गर्ने छैन, कुनै डरलाग्दो ग्राहक सेवा व्यक्ति, वा धक्का लाग्नेहरू, वा विवादास्पद व्यक्तिहरू, वा पूरै मद्दत छैन।
स्थानीय करहरूको पाण्डोरा बक्स खोल्दै
कर फाउण्डेशन सूचीकृत Sales, local०० स्थानीय बिक्री कर क्षेत्र। कल्पना गर्नुहोस् प्रत्येक ईकॉमर्स साइटले अब changing, 9,600०० बिभिन्न स्थानीय करहरू लाई निरन्तर परिवर्तन गरिरहेको छ। प्रत्येक मोबाइल अनुप्रयोगलाई ,,,०० बिभिन्न कर नियमहरूमा पुन: निर्माण गर्न आवश्यक पर्दछ। ईकॉमर्स प्रदायकहरूले करहरू फाइल गर्नु पर्ने हुन्छ हरेक इलाका तिनीहरू व्यापार गर्छन्। यो पागल हो।
स्थानीय करले उद्यमशीलतालाई मार्नेछ
वेबमा प्रत्येक सानो व्यवसायलाई बिदाइ दिनुहोस् जसले यी लागतहरूसँग सम्बद्ध ओवरहेड खर्च गर्न सक्दैन। निश्चित छ ... नयाँ समाधानहरू विकसित हुनेछन्, नयाँ व्यवसायहरू जसले तपाईंको लागि फाइल फाइलिंगहरू प्रबन्ध गर्छन्। तर लागत तपाईंले खरीद गर्नुहुने प्रत्येक उत्पादमा थपिनेछ - नयाँ बिक्री करको अतिरिक्त। केवल वाणिज्य साइटहरू छोडिनेछन् ठूला केटाहरू जो लागत वहन गर्न सक्दछन् र यो गडबडी पहिलो स्थानमा सुरु गरे। साना व्यवसाय र उद्यमीहरू खराब।
यसले खेल्ने मैदान बनाउँदछ उचित खुद्रा विक्रेता र ecommerce बीच? यसका बारे निष्पक्ष केहि छैन। अमेरिकी अर्थव्यवस्थाको अन्तिम क्षेत्र जुन फस्टाइरहेको छ अब सबैजनालाई बिछाउने, लगानीको अभाव र व्यवसाय बिक्रीबाट बाहिर जानेछ। ठूला बाकस खुद्रा विक्रेताहरूसँग जुन त्यो दिशा पहिले नै हेरिरहेको थियो।
टैग: इकमर्सइन्टरनेटइन्टरनेट बिक्री करइन्टरनेट करस्थानीय बिक्री कर
Mobilenomics: यदि तपाईं मोबाइल हुनुहुन्न भने, तपाईं मार्केटिंग गर्नुहुन्न
प्रदर्शन: संस्करण सबै
अप्रिल 22, 2013 मा 6: 04 PM
मलाई लाग्छ कि हामीले डाकघरमा "निष्पक्ष" हुन ईमेल कर सुरु गर्नुपर्दछ।